Ivermectin 1% + Closantel-10% Inaliti - China Chongqing Fangtong
Ivermectin 1% + Closantel 10% Inaliti
Imbonakalo Lo evuthiweyo ukuba sinombala ulwelo tyheli ecacileyo. UKWAKHIWA ml nganye iqulethe: 10mg Ivermectin, Closantel: 100mg. Inkomba yonyango trematode mixed (ngengozi) kunye nematode okanye સંસાધક isisebenzisi zintwala ngenxa zesisu ziiroundworms, lungworms, eyeworms, warbles, ntwala neentwala eenkomo. ziintshulube emathunjini Ostertagia ostertagi (kuquka izigaba ezi Webhsayithi mibungu), Ostertagia lyrata (adult), Haemonchus placei (abadala kunye ubuntwana), Trichostrongylus axei (abadala kunye ...
Lo evuthiweyo ukuba sinombala ulwelo tyheli ecacileyo.
ml nganye iqulethe: 10mg Ivermectin, Closantel: 100mg.
Kuba unyango lwe trematode mixed (ngengozi) kunye nematode okanye સંસાધક isisebenzisi zintwala ngenxa zesisu ziiroundworms, lungworms, eyeworms, warbles, ntwala neentwala eenkomo.
Ostertagia ostertagi (kuquka izigaba ezi Webhsayithi mibungu), Ostertagia lyrata (adult), Haemonchus placei (abadala kunye ubuntwana), Trichostrongylus axei (abadala kunye ubuntwana), colubriformis Trichostrongylus (abadala kunye ubuntwana), Cooperia (abadala kunye ubuntwana) oncophora, Cooperia punctata ( abadala kunye ubuntwana), Cooperia pectinata (abadala kunye ubuntwana), Oesophagostomum radiatum (abadala kunye ubuntwana), Nematodirus helvetianus (adult), Nematodirus spathiger (adult), Strongyloides papillosus (adult), Bunostomum phlebotomum (abadala kunye ubuntwana), Toxocara vitulorum ( abadala), Trichuris spp.
Dictyocaulus viviparus (abadala kunye 4 isigaba kwindawo).
Kwesibindi Iphiko (trematodes)
Unyango Iphiko kwi kwiiveki 12 (aqolileyo)> 99% ngempumelelo.
Unyango Iphiko kwi kwiiveki 9 (ubuntwana, emva)> 90% ngempumelelo.
ezidlile Inkomo (izigaba olwaye lwamfimfitha)
IVERTEL ayikho ukuba ukusetyenziswa efakwa okanye intramuscular.
Avermectins kungenzeka zingavunyelwa kakuhle kuzo zonke iintlobo non-ekujoliswe (amatyala nobandlululo kunye esibulalayo
ingxelo ezinjeni ingakumbi Collies, Bobtails, Old IsiNgesi Izinja kunye iintlobo ezinxulumene okanye iminqamlezo,
kananjalo Ufudo / amafudo).
Musa ukuyisebenzisa kwiimeko hypersensitivity eyaziwa ukuya izithako ezisebenzayo.
Musa ukulawula concomitantly kunye iikhompawundi ikhlorini. Ifuthe agonists Gaba Ekwandeni yi ivermectin.
AMANYATHELO EZIZODWA FOR USE
Imithamo ngaphezu 10ml kufuneka lesitofu kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo ukwenzela ukunciphisa ukungaphatheki ehlala okanye reactions kuyo inaliti.
Kucetyiswa ukuba alawule imveliso xa Hypoderma lineatum kwindawo abekiwe kummandla periaesophagic, okanye xa Hypoderma bovis kwindawo ezise- emjelweni spinal. Funa ingcebiso yobungcali lwezilwanyana ukujonga ixesha kangangoko ukusetyenziswa.
Oyidlayo NOLAWULO INDLELA
1 ml-50 kg. ubunzima bomzimba, ilingana 200 mcg / kg Ivermectin kunye 2 mg / kg Closantel.
ngeedosi ongowohlobo 4.0 mg / kg ivermectin (amaxesha 20 idosi recommended) elawulwa kwesikhumba, kukhokelela Ataxia kunye nokudakumba. Akukho ikhubalo sele iboniwe. unyango lingaze kunokuba luncedo.
Iimpawu overdosage of Closantel nga ziquka ukungabi namdla, sinciphise umbono, ilindle evakalala yokubakho qho defaecation. ngeedosi aphezulu kunokubangela ukungaboni, hyperventilation, nokushisa, ubuthathaka jikelele, Inco-ordination, unditsho, tachycardia kwaye ngokugqithiseleyo ukufa. Unyango lwe overdosage ibonisa njengoko sele ichongiwe akukho ikhubalo.
Inyama: iintsuku 35.
Akuvunyelwanga ukusetyenziswa iinkomo ukuvelisa ubisi ukutyiwa ngabantu.
Musa ukuyisebenzisa xa iimazi zobisi non-phindeke kuquka ezingekazali abakhulelweyo leyo obusenzelwa ukuvelisa ubisi
ukutyiwa ngabantu zingaphelanga iintsuku ezingama-60 parturition kulindeleke.
Musa ukusebenzisa naziphi iimveliso closantel aqulethe ngexesha ekubalekeni 35 ngosuku.
Xa 50ml okanye ibhotile 100ml.
Egcinwe kwindawo ebandayo, eyomileyo nemnyama.
Next: Inaliti ivermectin 1%
Ivermectin + Closantel Inaliti